သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ကန္တာရမိုး
စာရေးသူ--> တပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:17 AM
မအိမ့်... description ရေးတာမှာ အရမ်းတော်တယ် ။ အသေးစိတ် တခုချင်း စလိုးမိုးရှင်းနဲ့ သွားနေသလို မျက်စိထဲ မြင်လာတယ် ။
အချစ်ဝတ္ထုလေးတွေ ရေးပါဦး ။ မအိမ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပဲ ဖြစ်၂.. သိထားတဲ့ သူများအကြောင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ ။ ခုတလော ဘလောဂ့်မှာ အချစ်တွေ လိုအပ်နေတယ် ။ မောင်ရန်ကတော့ အလွမ်းတွေအပြည့်နဲ့ လုပ်နေလေရဲ့ ။ ကျွန်မကတော့ အတွေးတွေနဲ့ ဖြည့် ။ ဒီတော့ မအိမ့်က အချစ်ရည်လေးနဲ့ ပက်ဖြန်းလိုက်ပါဦးး)
အမလေးလေး.... ရေဆာလိုက်တာနော်......။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ရေငတ်သွားတယ်ဗျာ...။ အရေးအသားကတော့ ဂွတ်ရှယ်ပဲ.....။
ဖတ်ရတာ အာဂေါင်တောင်ခြောက်သွားတယ်- :)
မဂျစ်ကတော့ဗျာ. ကော်မန့်ရေးတာတောင် ကျွန်တော့်ကို ခလုတ်ဝင်တိုက်သွားသေးတယ်.
ဟုတ်တယ်မလေးရေ.. ကိုနေခြည်နဲ့ ကိုကိုတက်စ်ကြီးပြောသလိုပဲ. Sprite တစ်ဗူးတောင် ကုန်သွားတယ်. (ကြုံတုန်းကြွားလိုက်တာ ဟတ်ဟတ်ဟတ်)
ကျွန်တော်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ပျိုးနေတယ်. မလေးနာမည်ထည့်သုံးထားတယ်. ဟဲဟဲ မကြာခင်သိလိမ့်မယ်နော်.
အချစ်အကြောင်းရေးဖို့ လောလောဆယ် ကုန်ကြမ်းကုန်နေလို့ပါ။
ကိုနေကြီး နဲ့ ကိုတက်စ်ရေ..အားပေးတာကျေးဇူး..ရေငတ်ရင် ကနေဒါက spring water စင်စစ်ရမယ်… မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းက ပျော်ကြလာတဲ့..glacier တွေဆီက ရေသန့်ရမယ်။ ရေကြော်ငြာဝင်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်…။
ကိုရန်..ကိုနေခြည်မဟုတ်ပါဘူး..ကိုနေကြီးဆိုတဲ့ ကျားကျားယားယားနာမည် သူနဲ့မှ ကိုနေခြည်ဖြစ်ရတယ်လို့..